ဒသမ အကြိမ်မြောက် အာခါရိုးရာ ခါးထောင်းဖား စုပေါင်းနှစ်ကူးပွဲတော် စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင? - Yangon Media Group
ဒသမ အကြိမ်မြောက် အာခါရိုးရာ ခါးထောင်းဖား စုပေါင်းနှစ်ကူးပွဲတော် စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင?
တာချီလိတ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၈
အာခါတိုင်းရင်းသားများ စုပေါင်းနှစ်သစ် ကူးပွဲတော် ကျင်းပရေးကော်မတီ (ဗဟို)က ကြီးမှူးစီစဉ်ဆောင်ရွက် မှုဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့ ဆန်ဆိုင်း(ခ)ရပ်ကွက် ရှမ်းရိုးမကွင်း၌ ဒသမအကြိမ် မြောက် အာခါတိုင်းရင်းသားရိုးရာ ခါးထောင်းဖား စုပေါင်း နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက် နံနက်ပိုင်းက အာခါတိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများနှင့်အညီ ကျင်းပသည်။
အခမ်းအနားတွင် အာခါတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးအာဗေလ၊ တြိဂံတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဇော်အေး၊ နယ်မြေခံတပ်မှ ဗိုလ်မှူးကြီးအေးမင်းဦး၊ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်ဝင်းရွှေနှင့် အာခါရိုးရာ ခါးထောင်းဖားပွဲ တော် ကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးချစ်ဂျွေ့တို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ် ပြီးနောက် တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်အောင် ဇော်အေးက ဒသမအကြိမ်မြောက် အာခါရိုးရာ ခါးထောင်းဖား နှစ်သစ်အမှာစကား ပြောကြားပြီး အာခါ တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးမင်းညိုကပွဲ တော်ကျင်းပရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ စုပေါင်းနှစ်သစ် ကူးပွဲတော်အလှူငွေနှင့် လက် ဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခြင်း၊ စုပေါင်းနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် နှုတ်ခွန်းဆက်တေးသီချင်းနှင့် တာချီလိတ်- မိုင်းဆတ်-ကျိုင်းတုံ အာခါတိုင်းရင်းသားများ၏ ရှေးရိုးရာမြေဝိုင်းအကနှင့် ခေတ်ပေါ်တိုင်းရင်းသားအက ပဒေသာများဖြင့် ဖျော်ဖြေခြင်း၊ အာခါ တိုင်းရင်းသားများ၏ ယဉ်ကျေးမှု ပြခန်းများလိုက်လံပြသခြင်း၊ အာခါတိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာဟင်းလျာများဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခြင်းဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်တွေမှာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အချို့ အဓိကတာဝန်ကို မေ့နေ၊ ပင်နီ တိုက်ပုံပ?
ကြားဖြတ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးချယ်မှု ပြီးစီးတော့မည်ဟု ဒီချုပ် ဆို
တစ်ပြည်လုံး ငြိမ်းချမ်းပါက အချိန်တိုအတွင်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးလာကာ တိုင်းရင်းသာြး??
နည်းပြအဖြစ် လီဂူးတွင် လုပ်ကိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း မော်ရင်ဟိုဆို
ကုလသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးသံတမန် ခန့်အပ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အကူအညီဖြင့် တည်ဆောက်မည့် တံတားများအနက် မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်လမ်းရှိ မဟူရာချေ?